Accountant | Gold Yacht Co., Ltd. ﻿
17.1.2019, Full time , Export / Import / Trading
Gold Yacht Co. is one of leading manufacturer and exporter of garments. We produces woven jackets, pants, panties and under wears. We export to U.S.A, Canada and Germany. We use only the highest quality material and components available today. We can also produce according to customer’s specification and design. We know exactly our customer want so we will offer our good quality, competitively price and on time delivery.
•	Accountant အတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည်။
•	MIT Software အသုံးပြုနိုင်သူကို ဦးစားပေးမည်။
•	ဘွဲ့ရ၊ အသက်(20-30) အတွင်း ၊
•	အနည်းဆုံး LCCI Level-II ပြီးမြောက်အောင်မြင်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။
Work location 82, Twin Thin Tike Wun U Tun Nyo St., Industrial Zone (1),Hlaing Thar Yar,Yangon Region
Job Function: Accountant
Job posted: 17/1/2019
55 Days, Full time , Export / Import / Trading
•	မိမိတာဝန်ယူထားသော အလုပ်တာဝန်များကို Plan ချပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်သူ စီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းပြီး ဦးဆောင်ဦးရွက် လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။ •	အထည်ချုပ်စက်ရုံအတွေ့အကြုံရှိသူ ဦးစားပေးမည်။ •	ပေါင်းသင်း ...
59 Days, Full time , Export / Import / Trading
•	သွက်လက်ဖြတ်လတ်ပြီး လုပ်ငန်းတွင်ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်သူ ဦးစားပေးမည်။
•	အလုပ်တွင် စိတ်ဝင်စားပြီး ကြိုးစားလုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ယုဇနပလာဇာရှိ ရုံးခွဲတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
68 Days, Full time , Export / Import / Trading
•	အများနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်သူ ၊ •	ပြောဆိုဆက်ဆံရေးပြေပြစ်သူ ဖြစ်ရမည်။
•	ရုံးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူ ဦးစားပေးမည်။ •	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ရမည်။
•	ခရီးသွားလာနိုင်ရမည်။ •	ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းပြီး ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။
75 Days, Full time , Export / Import / Trading
•	လုပ်ငန်းတွင်း ရိုးသားစွာ လုပ်ကိုင်နိုင်သူ •	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ရမည်။
82 Days, Full time , Export / Import / Trading
•	သွက်လက်ချက်ချာပြီး လုပ်ငန်းတွင်ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်သူ ဦးစားပေးမည်။
94 Days, Full time , Export / Import / Trading
•	Accountant အတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည်။ •	MIT Software အသုံးပြုနိုင်သူကို ဦးစားပေးမည်။
100 Days, Full time , Export / Import / Trading
•	Admin လုပ်ငန်းစဉ်များ ကောင်းမွန်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ရမည်။ •	ဌာနဆိုင်ရာ ရုံးများသို့ ဆက်သွယ်သွားလာနိုင်သူ၊ စက်ရုံလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူ ဦးစားပေးမည်။ •	အများနှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီး ...
•	ဆိုင်ကယ်စီး ကျွမ်းကျင်ရမည်။ •	လိုအပ်ပါက ခရီးသွားနိုင်ရမည်။ ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီး အများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	( သက်ဆိုင်ရာနယ်ခံများသာ လျှောက်ထားရန် )
•	စိတ်ရှည်ပြီး အများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူ ဆက်ဆံရေးအထူးကောင်းမွန်ရမည်။ •	ရေရှည်လက်တွဲလုပ်ကိုင်နိုင်သူ ဦးစားပေးပါမည်။
Accountant Accountancy Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon Gold Yacht Company Limited Accountancy Jobs Accountancy Jobs Accountant Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Co Co Store
Emerald Myanmar Group
HYE Environmental Technology Co., Ltd
Pingu’s English International Kindergarten
Mandalay Region 10 Days
Mandalay Region 26 Days
Mandalay Region 58 Days
Mandalay Region 67 Days
Mandalay Region 69 Days
Mandalay Region 74 Days
Mandalay Region 85 Days
Mandalay Region 93 Days
Mandalay Region 94 Days
Mandalay Region 102 Days
Mandalay Region 152 Days
Mandalay Region 216 Days
Mandalay Region 258 Days
Mon State2Days